मर्निङ वाकको बहानामा यौ’न लीला मञ्चाउने नेपाली युवायुवती प’क्राउ – Ujyaalo Patrika
मर्निङ वाकको बहानामा यौ’न लीला मञ्चाउने नेपाली युवायुवती प’क्राउ
बिहानै देह सुख! मानिसको चाहनाको कुनै सीमा छैन। हिजोआज मर्निङवाकमा जानेहरू साथीसहित होटलका कोठामा जाने गरेका छन्। दिउँसो र बेलुका होटलमा छापा मार्ने चलन बाक्लो भएपछि जोडाजोडीले अवैध शारीरिक सम्बन्धका लागि बिहानको समय चुनेका हुन्।
‘कोठा खोज्नुभाको हो सर? कति घण्टालाई हो?’ सोमवार बिहान सुन्धाराको एक होटलका बोर्डमा आँखा डुलाउँदै गर्दा एकजना किशोरले पछाडिबाट साउती गरे। ‘केटी पाइन्छ भाइ?’ हामीले आफ्नो रिपोर्टिङको ध्येय अनुसार प्रश्न गर्‍यौँ। ‘त्यो त साहुजीलाई सोध्नुपर्छ,’ ती किशोर खुर्रर कुदेर होटलतिर लागे। एकछिनमा आएर भने, ‘तपाईंले नै केटी बोलाउनुभएको छैन?’ छैन भन्ने संकेतले टाउको हल्लाएपछि उनी निराश हुँदै धरहरातिरबाट आइरहेको ट्याक्सीभित्र हेर्न थाले।
Previous हनिमुन मनाउन होटल गएका थिए जोडी, भयो यस्तो घटना बेहुलीलाई अर्कै कोठामा लगियो
Next सबैलाई पारे अचम्ममा पारेर टुप्पीले कार घिसार्ने चितवनका गोर्खे दाइ, हेर्नुहोस (भिडियोसहित)